Proverb 1883 Entam-panjozoro : bataina , tsy zakan’ irery ; aiditra , tsy omby varavarana ; ataina , tsy mahaloaka alina. [Cousins 1871 #871, Nicol 1935]
Entam-panjozoro : batain-tsy zakan' ny irery ; aiditra , tsy omby varavarana ; ataina , tsy mahaloaka alina . [Veyrières 1913]
Entam-ponjozoro : bataina tsy zakan' ny irery , aiditra tsy omby varavarana , fa nony ataina indray alina monja. [Rinara 1974 #70]
Mivongovongo foana hoatry ny entam-panjozoro : batain-tsy zakan' ny irery ; aiditra , tsy omby varavarana ; ataina , tsy mahaloaka alina . [Veyrières 1913]
Mivongovongo foana toy ny anten-jozoro : entina tsy zakan' ny irery , aiditra tsy omby varavarana , ataina tsy mahaloaka alina . [Rinara 1974 #2528]
Mivongovonto foana, ohatra ohatra entam-panjozoro : entina , tsy zakan’ ny irery ; aiditra , tsy omby varavarana ; ataina , tsy mahiloaka alina. [Cousins 1871]
Toy ny entan- -jozoro : bataina , tsy zakan' ny irery; aiditra , tsy omby varavarana ; ataina , tsy mahaloaka alina . [Houlder 1895]
Proverb 1885 entan- -draty roa fehy : aiditra atosik' efa-dahy ; ataina , tsy mahaloaka alina . [Veyrières 1913 #5898, Cousins 1871 #872]
entan- -draty voafehy : aiditra atosik' efa-dahy , ataina tsy mahaloaka alina . [Rinara 1974 #1035]
Proverb 5934 Patsa no andrahoina , ka kitay aiditr' olon-droa no tadiavina . [Rinara 1974 #224]